Tantara: Mpangalatra Iray teo Amin’ny Israely - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Tokony ho nolevonina izany, ary ny volamena sy ny volafotsy dia tokony ho natolotra ho an’ny rakitry ny tranolain’i Jehovah. Koa tsy nankatò an’Andriamanitra àry ireto olona ireto. Nangalatra izay an’Andriamanitra izy. Akana no anaran’ilay lehilahy, ary anisan’ny ﬁanakaviany ireo miaraka aminy. Aoka hojerentsika izay nitranga.
Taorian’ny nangalaran’i Akana ireo zavatra ireo, i Josoa dia naniraka lehilahy sasany mba hanaﬁka ny tanànan’i Ay. Nefa resy tamin’ny ady izy ireo. Maty ny sasany, ary nandositra ny sisa. Nalahelo aoka izany i Josoa. Niankohoka tamin’ny tany izy ary nivavaka tamin’i Jehovah: ‘Nahoana no navelanao hitranga aminay izao?’
Namaly i Jehovah hoe: ‘Mitsangàna! Nanota ny Israely. Naka sasany amin’ny zavatra tokony holevonina na homena ho an’ny tranolain’i Jehovah izy. Nangalatra akanjo lava tsara tarehy iray izy ary nanaﬁna izany. Tsy hitahy anareo aho ambara-pandevonareo izany, sy ilay naka ireo zavatra ireo.’ Nilaza i Jehovah fa hasehony an’i Josoa ilay olona ratsy fanahy.
Rehefa hita ireo zavatra ireo ary nentina tany amin’i Josoa, dia hoy izy tamin’i Akana: ‘Nahoana ianao no nitondra fahasahiranana ho antsika? Ankehitriny i Jehovah dia hitondra fahasahiranana ho anao!’ Tamin’izay dia nitora-bato an’i Akana sy ny ﬁanakaviany ho faty ny olona rehetra. Moa ve tsy mampiseho izany fa tsy tokony haka na oviana na oviana zavatra izay tsy antsika isika?
Taorian’izany dia nandeha nanaﬁka an’i Ay indray ny Israely. Tamin’izay dia nanampy ny olony i Jehovah ary nandresy tamin’ny ady izy ireo.
Nanao ahoana ny ﬁfandraisan’i Josoa tamin’ilay Mpamorona azy, araka ny asehon’ny vavaka nataony? (Josoa 7:7-9; Sal. 119:145; 1 Jaona 5:14)
Inona no andraikitsika tsirairay amin’ny ﬁangonana kristianina? (Josoa 7:13; Lev. 5:1; Ohab. 28:13)